कसरी भयो यस्तो ? ३ जना युवती र १ पुरुष मृत अवस्थामा फेला — SuchanaKendra.Com
कसरी भयो यस्तो ? ३ जना युवती र १ पुरुष मृत अवस्थामा फेला
काठमाडौ । काठमाडौं, कागेश्वथरी मनहरा नगरपालिका–८ थिकल चोक बस्ने सिन्धुली कोसीपारी गाउँपालिका–८ घर भएकी २६ वर्षीया अस्मिता तोलाङगी मंगलबार बिहान मृत अवस्थामा फेला परेकी छन् । सोमबार राति खाना खाएर सुतेकी उनी मंगलबार बिहान मृत फेला परेकी हुन् । बर्दिया, बारबर्दिया नगरपालिका–८ औरी बस्ने ३८ वर्षीया ममता बिसी सोही ठाउँस्थित औरी खोलामा सोमबार साँझ मृत अवस्थामा फेला परेकी छन् ।
टाउको दुखेकोले झारफुक गर्न जान्छु भनी घरबाट निस्केकी उनी सोही ठाउँस्थित औरी खोलामा डुबेर मृत्यु भएको अवस्थामा फेला परेकी हुन् । ललितपुर, बागमती गाउँपालिका–२ बघुवापुलस्थित किनारमा हाल नाम, थर, वतन नखुलेकी करिब ५५ वर्षीया महिला सोमबार साँझ मृत अवस्थामा फेला परेकी छन् । यस सम्बन्धमा स्थानीय प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
यता बाराको करैयामाइ गाउँपालिका–५ तेतरीया टोल बस्ने ६० वर्षीय उदयमान सहनीको करेन्ट लागेर सोमबार राति मृत्यु भएको छ । मोटरबाट खेतमा पानी हाल्ने क्रममा करेन्ट लागि गम्भीर घाइते भएका उनको कलैया अस्पताल बारातर्फ लैजाने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको हो । यस सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ ।